Monday, 12 Feb, 2018 4:01 PM
हरेक मानिसको चाहना हुन्छ आफ्नो जीवनमा एउटा सुन्दर सपनाको घर बनाउने । घर बनाउनका लागि सुरुमा घडेरी जोड्ने चाहना हुन्छ । तर, आफुलाई अत्यावश्यक घडेरीको खोजी गर्न भने सममस्या पर्छ । त्यसो त, कतिपय व्यवसायिक र निजी प्रयोजनका लागि घर, अपार्टमेन्ट तथा महलहरू निर्माण भैरहेका पनि छन् । व्यवसायिक प्रयोजन होस् या निजी प्रयोजन, नेपालमा घर जग्गाको कारोबार निकै उच्च छ । घरजग्गाको कारोबार उच्च भए पनि यो क्षेत्रमा निकै अस्तव्यस्तता देखिन्छ । बीचमा रहेका बिचौलियाका कारण घरजग्गा खरिद गर्ने र बेच्ने आपसमा भेट्न नसक्ने, आपसमा मोलमोलाई गर्न नसक्ने तर बिचौलियाले भने हामीमुहाली गर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा खरिद गर्नेलाई महंगो पर्ने र बिक्री गर्नेलाई आफ्नो मोल नपाउने अवस्था छ ।
विभिन्न तह र बिचौलियाको भर पर्दा कहिलेकाहीँ घरजग्गा कारोबार गर्दा मानिसहरू ठगिएका पनि छन् । नेपालमा घरजग्गा खरिद तथा विक्रीको लागि तथा आवश्यक सरसल्लहको लागि संस्थागत माध्यमको अभाव भइरहेका बेला हाइल्याण्ड प्रोपोर्टिज प्रा.लि.ले ‘घरजग्गाको साथी’ ब्राण्डमा आफ्नो सेवा सुरू गरेको छ । घरजग्गा खरिद विक्री तथा भाडामा लिनदिन संस्थागत सेवा भन्दै आफ्नो सेवा सुरू गरेको हाईल्याण्ड प्रोपर्टिज डिलर्स एण्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि.का निर्देशक भवि शर्मासँग न्यूजसेवाले कुराकानी गरेको छ ।
तपाईहरूले अहिले घरजग्गाको साथी भन्दै ब्राण्डिङ गरिरहनुभएको छ, खासमा घरजग्गाको साथी भनेको के हो ?
मानव संसारमा जीवन जीउनकोे लागि गास, वास र कपासको आवश्यकता हुन्छ । सबै मानिसहरु आफ्नो खुट्टामा टेक्ने भईसकेपछि निजी वासस्थानको सपनामा हुन्छन र आफ्नो आर्थिक, नैतिक र भौतिक क्षमताले भ्याएसम्म निवासको व्यवस्थापन गर्न चाहन्छन । यस्ता मानिसहरुलाई सहज, सरल र कानुनी हिसावले पूर्ण भएका र आफुले भनेको ठाउँमा, भनेको समयमा आफ्नो मूल्यमा घरजग्गा किनबेच गराउने उद्देश्य बोकेको छ घरजग्गाको साथीले । घरजग्गा किनवेच गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कानुनी तथा व्यवहारिक सबैखाले प्रक्रियाहरु पूरा गरी खरिदकर्ता र विक्रेतालाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराई एकआपसमा कायम गरिएको मूल्यमा कारोवार गराउने एक मात्र प्रोपर्टी मार्केटको कंम्पनी हाईल्याण्ड प्रोपर्टिज डिलर्स एण्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि. हो । यसै कम्पनीले आफ्नो ब्यवसायिक नारा घरजग्गाको साथी मार्फत वजारमा प्रस्तुत भएको हो ।
घरजग्गाको साथीमार्फत् तपाईहरूले दिने सेवा के–के हुन् ?
घरजग्गा सम्बन्धित आवश्यक सम्पूर्ण सेवाहरु घरजग्गाको साथीले दिन्छ । जस्तै खरिदकर्ताले आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसार चाहेको ठाउँमा घरजग्गा खोजिदिने, घर निर्माण गर्ने, घर विक्रि गर्ने, घर खरिद गर्ने, घर भाडामा दिने, घर भाडामा लिने, घरको स्ट्रक्चरल डिजाईन गर्ने, घरको बाहिरी डिजाईन गर्ने, घरको आर्किटेक्चरल डिजाईन गर्ने, घरको इन्टेरियर डिजाईन गर्नुका साथै जग्गा विक्रि गर्ने, जग्गा खरिद गर्ने, जग्गा भाडामा दिने, जग्गा भाडामा लिने जस्ता सेवाहरु घरजग्गाको साथीमार्फत पाउन सकिन्छ ।
अहिले पनि बजारमा विभिन्न व्यक्ति, समुहले घरजग्गाा खरिद विक्रीका लागि मध्यस्तता गरिरहेका छन्, उनीहरू र तपाईहरूमा फरक के छ ?
घरजग्गा खरिद विक्रि गर्दा हुने गरेको अहिलेको मुख्य समस्या नै संस्थागत नभई अपरिचित व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहले यो सम्वन्धी काम गर्नु हो । यस्ता व्यतिm वा समूहको माध्यम बनाई खरिदकर्ता र विक्रेताले काम गर्दा यो क्षेत्रमा ठूल्ठूला समस्या आएको र खरिदकर्ता र विक्रेता ठगिएको अवस्था छ । विचौलियाहरुले उनीहरुलाई प्रत्यक्ष भेट नगराई बीचमा बसेर ठूलो कमिशनको बार्गेनिङ गर्नुको साथै विक्रेताले भनेको मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा क्रेतालाई किन्न लगाउने र विभिन्न बाहाना बनाएर ठग्ने प्रवृति बढेको छ । यस्तो समस्या समाधान गर्नको लागि क्रेता र विक्रेता दुवैलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गरी आवश्यक छलफल गरेर मुल्य कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । क्रेता र विक्रेता दुवै पक्ष कसैवाट ठगिनु नपरोस भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हामीसँग घर जग्गा किनवेच गर्नका लागि चाहिने कानुनी तथा व्यवहारिक परामर्शको लागि सम्बन्धित बिज्ञहरुवाट आवश्यक्ता अनुसार परामर्श निशूल्क दिईन्छ । त्यसै कारण अहिले बजारमा मध्यस्तता गरिरहेका व्यक्तिहरु र हामीमा फरक छ ।
तपाईहरूले मात्र ०.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिएर सेवा दिने भन्नुभएको छ, यो पपुलारिटीको लागि हो या वास्तविकता नै ?
क्रेता र विक्रेता दुवै पक्ष स्वयं हाम्रो कम्पनीमा उपस्थित हुनुभएको अवस्थामा कारोवार मूल्यको ०.५ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिन्छांै । कहिलेकाँही क्रेता र विक्रेता स्वयम उपस्थित नभई वहाँहरुको सम्पत्ती किनवेचको लागि हामीकँहा आउनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा वहाँहरुले माध्यम बनाएर पठाएको व्यक्तिहरुले हामीलाई ४÷ ५ प्रतिशत चाहिन्छ भनेर बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले भनेको सेवा शूल्क बढ्न सक्छ । त्यसकारण क्रेता र विक्रेता स्वयम हाम्रो कम्पनीमा आएर कसैसँग जालझ्mेल नगरी कारोवार गर्नहोस भन्ने हो । कुनै पपुलारिटिको लागि ०.५ प्रतिशत सेवा शूल्क लिएर सेवा दिएको होइन ।
यति थोरै शुल्क लिएर तपाईंहरू सस्टेन हुन सक्नुहुन्छ त ?
हाईल्याण्ड प्रोपर्टिज डिलर्स एण्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले घरजग्गाको साथीमार्फत धेरै भन्दा धेरै क्रेता र विक्रेताहरुलाई एक आपसमा भेट गराई भरपर्दो तरिकाले धेरै भन्दा धेरै कारोवार गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । यो कुरा सम्बन्धित क्रेता र विक्रेताहरुले विश्वास गर्नुभयो भने हामी थोरै शुल्क लिएर पनि काम गर्न सक्छौ भन्ने विश्वास छ । यो हाम्रो परीक्षणकाल पनि हो ।
अहिले बजारमा खरिदकर्ता र विक्रीकर्ता आपसमा भेट नगराउने, दुईतिरै कमिशन खाने, विक्रेताले कम पैसा पाउने र खरिदकर्ताले धेरै रकम तिर्नुपर्ने समस्या छ ? तपाईहरुको पनि यस्तै हुन्छ या कसरी सेवा दिनुहुन्छ ?
अहिले घरजग्गा सम्बन्धित कारोवार गर्ने क्रेता र विक्रेताहरु बढि नै ठगिनुभएको अवस्था छ । विचौलियाहरुले दुवै पार्टीसित कमिशन लिनेदेखि फरक फरक मूल्यमा क्रेता र विक्रेतालाई घुमाईरहेको अवस्था यो वजारमा देखिन्छ । सामान्यतया संसारभरी क्रेता र विक्रेताहरुको कारोवार कानुनी मान्यता प्राप्त निकायबाट भएको पाईन्छ तर नेपालमा यस्तो माध्यमहरुको संस्थागत विकास भएको देखिदैन । कानुनी रूपमा आधारविहिन व्यतिm वा समूहहरुले यो क्षेत्रको बजार कब्जा गरेका छन् । यो देखेको कुरा हो उनीहरुको न सम्पर्क गर्ने अफिस हुन्छ न कुनै कानुनी आधार । यस्ता मानिसहरुले गर्दा यो क्षेत्रमा काम गर्ने राम्रा कम्पनीहरुको पनि बद्नाम भएको पाईन्छ । घरजग्गाको साथीले सामान्य रुपमा ०.५ प्रतिशत सेवाशूल्क विक्रेताबाट मात्रै लिन्छ ।
तपाईहरूको मूख्य कारोबार राजधानी मात्रै हो वा नेपालभर पनि हो ?
हाईल्याण्ड प्रोपर्टिज डिलर्स एण्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले घरजग्गाको साथी मार्पmत आवश्यकता अनुसार नेपालभरी नै हाम्रो कारोवार हुन्छ र छिट्टै नै हामीले प्रत्येक प्रदेशमा हाम्रो शाखा कार्यालयहरु खोल्दैछौं । त्यसपछि यस क्षेत्रका क्रेता र विक्रेताहरुलाई कारोवार गर्न झनै सरल र सहज हुन्छ ।
मूख्य प्राथमिकता कस्ता व्यक्ति वा समुहलाई दिनुहुन्छ ? फोकस पर्सन को हुन् ?
घरजग्गाको कारोवारसँग सम्बन्धित नेपालभरीका मानिसहरु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छन चाहे उनीहरुले सानो कारोवार गरुन वा ठूलो कारोवार । हाम्रो कम्पनी कुनै व्यतिm विशेषको लागि होइन । यस क्षेत्रमा भएका व्यथिती र अत्याचारका विरुद्व हो । घरजग्गामा कारोवार गर्ने वा कारोवार गराउने सवै संस्था वा व्यक्तिहरू पारदर्शी हुनुपर्छ र कानुनी घेरामा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसकारण हामी सबैलाई समान व्यवहार गर्छाै, सबै मानिसहरु हाम्रा ग्राहक बन्न सक्छन ।
घरजग्गा कारोबार गराउन संस्थागत रूपमै आउनुभयो, यसमा ठुलो विजनेस भोलुम देख्नुभयो अथवा यो संस्थागत सेवा दिने सोँचको कसरी विकास भयो ?
हामीहरुसँग यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूको समूह छ । यो व्यवसायमा अवसर पनि छ । संसारमा मात्र नभई नेपालमा यसको कारोवार अत्यन्त लार्ज भोल्युममा हुन्छ । त्यसकारण हामीले यो क्षेत्रमा ठूलो व्यापारको सम्भावना देखेको कारणले गर्दा आएका हांै । हामीले सोचेजस्तो सजिलो त पक्कै छैन, तर यस क्षेत्रलाइ व्यवस्थित बनाई संस्थागत व्यवसाय गर्न हामी पक्कै सफल हुनेछौँ । यस क्षेत्रमा कारोवार गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई संस्थागत रुपमा व्यवसायिक सेवा दिने हाम्रो उद्देश्य हो । हामीले सेवा दिँदा कोही ठगिनु हुनेछैन कोही अन्यायमा पर्नुहुने छैन । यो हाम्रो व्यवसायिक सेवाको प्रतिवद्वता हो ।
घरजग्गा कारोबार गर्ने अरू थुप्रै संस्था पनि छन्, समुह पनि छन्, उनीहरूलाई छाडेर घरजग्गाको साथीमार्फत् नै कारोबार गर्नुपर्ने कारण के ?
हाईल्याण्ड प्रोपर्टिज डिलर्स एण्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अर्थात घरजग्गाको साथी एक अनुभवी र परामर्शदाता कम्पनी हो । यसमार्पmत ०.५ प्रतिशत न्यूनतम सेवाशूल्क लिएर भरपर्दाे तरिकाले क्रेता र विक्रेतालाई सहज र सरल बनाई सेवा दिन्छ । नेपालमा औपचारिक रुपमा यस्तो सेवा दिने अरु कुनै व्यतिm वा संघसंस्था यो बजारमा छैनन भन्नुपर्छ । अहिले यो क्षेत्रमा सेवा दिने विभिन्न व्यतिm वा संस्थावाट क्रेता र विक्रेता ठगिएको सवैलाई महशुस भईरहेकै छ । विचौलियाहरुले बिना लगानीमा अत्याधिक फाईदा उठाइरहेका छन् । यस्ता व्यक्ति वा समूहदेखि ठगिनबाट बच्न र आफनो सम्पत्तिको अत्याधिक फाईदा आँफैले लिन सम्पूर्ण क्रेता र विक्रेताहरू घरजग्गाको साथीमार्फत कारोवार गर्नुहन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । यो छोटो समयमा धेरै क्रेता र विक्रेताहरुले हामीलाई हौसला दिनुभएको छ ।